Waa maxay kormeerka dhaqaalaha iyo canshuurta?
Cilmi-nafsiga iyo Xiriirka Xirfadda
Waa maxay kormeerka iyo sababta loo baahan yahay?
Maareynta shirkad ama shirkad maaha hawl fudud. Xakamaynta geeddi-socodka oo dhan waa muhiim. Haddii kale, wakhtiga ugu badan ee aan la helin, waxaa laga yaabaa inay jirto dhibaato taasoo ugu dambeyntii u horseedi doonta musiibo. Waa maxay kormeerka iyo maxay yihiin noocyada kormeerka aan hadda ku talineyno si aan u ogaano.
Qof kasta ogyahay in tani ay tahay kormeer. Waa nidaam sida ururinta ama duubista, kaydinta iyo falanqaynta tiro yar oo astaamo ah oo sharaxaad ka mid ah shey gaar ah iyadoo ujeedadu tahay samaynta go'aannada ku saabsan dabeecadda (gobolka) shay ahaan guud ahaan. Kormeerka ayaa loo baahan yahay, marka hore, oo dhan, si loo xakameeyo hawlgalka xarun gaar ah iyo marka la aqoonsanayo dhibaatooyinka waxqabadka hawlgalka ee looga hortago.
Waa maxay kormeer dhaqaale?
Ganacsade kasta waa fahamsan yahay sababta kormeerka loo baahan yahay ganacsiga. Xaaladdan, waa kormeerka iyo xakamaynta akhristayaasha kaashka ah ee shaqsiyaadka iyo shirkadaha. Kormeerkan waxaa sameeya adeegga kormeerka dhaqaalaha. Xaqiijinta xogta iyo u wareejinta bangiyada ganacsiga. Sidoo kale, mawduucyada kormeer dhaqaale - isdhaafsiyo, shirkadaha caymiska, nidaamka lacag bixinta iyo qaababka kale ee maaliyadeed. Wadamo kala duwan, nidaamkani wuxuu leeyahay magac ka duwan "koontarool dhaqaale", "sirdoon dhaqaale".
Waa maxay kormeerka canshuurta?
Waxaan soo jeedineynaa in aan ogaanno waxa kormeerka nidaamka canshuurtu ka dhigan yahay. Mararka qaarkood waxaa sidoo kale loo yaqaan "kormeerka canshuurta toosan". Mabaadiida asaasiga ah waa daahfurnaanta shaqada iyo nidaamka canshuur-bixiyeyaasha ee qaab-dhismeedka kormeeraha gudaha. Nidaamka kormeerku wuxuu noqon karaa qalab hal-abuur ah oo siinaya fursad uu ku keeno xiriirka ganacsiga-dawlad-goboleed heer cusub oo cusub. Mid ka mid ah qaybaha muhiimka ah ee farsamadani waa fursad lagu abuuro isdhexgalka ka dhexeeya canshuur bixiyeyaasha iyo hay'adaha xakamaynta.
Maxaa loola soconayaa?
Mararka qaarkood su'aasha waxay noqotaa mid deg deg ah, sababtoo ah kormeerka waa muhiim. Tusaale ahaan, waxaad ku qaadan kartaa shirkad leh qayb yar, halkaas oo ay ku jiraan laba xafiis, kombiyuutar shakhsiyeed, qalabka xafiisyada kombiyuutarka, internetka iyo wixii la mid ah. Badanaa, hal maamul ayaa maamula qalabkaan. Maalinta shaqadu waa inay ka bilowdaa ficillada noocan oo kale ah:
Hubi in server uu shaqeynayo iyo heerkulka serverka aan la kordhin.
Hubi waxqabadka adeegyada muhiimka ah, internetka, boostada iyo codsiyada kale.
Hubi shaqada gurmadka.
Hubi in qalabka shabakadu shaqaynayo.
Maxaan ugu baahanahay jeegaga maalinlaha ah? Haddii aad ka maqnayd ugu yaraan hal dhibaato mustaqbalka ah, markaa tani waxay horseedi kartaa musiibo oo dhan. Tusaale ahaan waa ogaanshaha fashilka nuqullada koobi kaabaha ah sababtoo ah maqnaan la'aan. Sidaas, kiiskan, kormeerka ayaa loo baahan yahay si loo kormeero maamulayaasha oo loo qiimeeyo culeyska shaqada ee serverka.
Kormeerku wuxuu u kala qaybsan yahay noocyada kala duwan:
Miisaanka ujeedooyinka waxbarashada - istiraatiijiga, istiraatiijiyada, kormeerka hawlgalka.
Marxaladaha tababarka - gelitaanka, ama xulashada, tababarka ama dhexdhexaadka, soo saaraha ama finalka.
Waqti ku-tiirsanaanta - dib-u-soocelin, taxadar, hadda.
Hawlaha, astaamaha iyo hawlaha ugu muhiimsan waa barbaarinta, maamulka.
Baaxadda shayga fiirinta waa mid joogto ah, maxaliga ah, xulashada.
Foomamka ururada - joogto ah, shakhsi, koox.
Noocyada xiriirka shayga-mawduuca - dibadda ama bulshada, koontaroolka labada dhinac iyo is-falanqaynta.
Qalabka la isticmaalo waa mid la siman yahay, aan la isku-habaynin iyo qiyaasaha.
Waxaad baari kartaa walxaha ilaalinta, iyadoo la tixgelinayo mabaadiida soo socota:
Horumarinta - waa nidaam fulin, dhamaystirid mashaariic iyo abuurista kuwa cusub.
Muhiimadda hoggaaminta ayaa ah mucaaradka habka deegaanka.
Xasillooni - waa sii wadida mabaadi'da "maareyn - kormeer - imtixaan".
Xogta furfurnaanta waa xaalad muhiim u ah waxtarka.
Korjoogteynta waxqabadka - waxay muujisaa sida wax-qabadka shay kale u shaqeeyo.
Sidee loo kormeeraa?
Ma ogtahay waxa kormeerka iyo sida loola socdo? Waxaan bixinnaa talooyin kooban:
U dejiso yoolal cad oo loogu talagalay kormeerka loo baahan yahay. Waad ku mahadsan tahay xogta la helay, waxaad fursad u heli doontaa inaad ogaato dhibaatooyinka wakhtiga oo aad sameyso go'aano muhiim ah.
Go'aami liiska xuduudaha looga baahan yahay kormeerka. Iyada oo ay ku caawinayaan waxaa suurtogal ah in la sameeyo falanqayn isbarbardhig leh oo ku saabsan kala duwanaanshaha isbarbar dhiga.
Iyadoo lagu saleynayo natiijooyinka xakamaynta, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo falanqayn iyadoo la adeegsanayo hababka tirakoobka xisaabta. Horeba waxaa ugu wacan natiijooyinka la soo helay waxaad ku hagaajin kartaa hadafyada la dajiyay.
Codso habab si aad u aragto natiijooyinka xakamaynta. Iyada oo ay caawinayaan, waxaa suurtogal ah in la arko isbedelka isbedelka dhacaya.
Thanks to natiijooyinka falanqaynta, waxay soo saaraan gunaanad iyo bilaabaan diyaarinta go'aamada maareynta iyo soo jeedinta si loo tirtiro sababaha keenaya guul gaadhka himilada.
Sidee lacag loogu siiyaa youtube?
Sida loo noqdo wakiilka Avon online?
Sidee loo kaydiyaa lacag guri dabaq ah?
Warqad casri ah oo loogu talagalay iskaashiga
La shaqaynta diidmada iibka
Freelancer - yaa ah iyo sida loo noqon karo mid guuleysta freelancer?
Dhaqdhaqaaqa - maxay tahay iyo inta aad ku kasban karto hoos u dhigista?
Sida loo furo timo-jare carruurta ah xoqan?
5 Talaabooyinka loo marayo Xirfad ku guuleysi leh
Sida loo furo shirkad maareyn ah oo xoqan?
Sidee loo noqon karaa duuliye?
Alaabta guriga lagu dhejiyo
Labbis maro jilbaha
Nidaamka maamulka ee maamulka
Muxuu ilmuhu ubadkiisa badanaa ku raaxaystaa?
Maxay Pamela Anderson u qarineysaa wiilkeeda weyn?
Kylie Jenner ayaa ogaa dhibaatada aabaheed-jinsi ahaan
Victoria Justice iyo Nina Dobrev
Sida loo doorto laba wiil?
Munaasabadda maraakiibta Viking
Maxaad ku arki mooska marka hore?
Sidee loo tirtiraa indhoolayaasha toosan?
Maraqa cagaaran ee jiilaalka
Recipe for dufaan leh hilibka iyo baradhada
Sidee loo doortaa dhafoorka - maxaan u eegi doonaa ka hor intaadan iibsan?
Jilaaga Jennifer Lopez
Sidee loo kariyaa pilaf la kariyey?
Juliana Moore oo 56 jir ah waxay u muuqataa muuqaal qurux badan oo muuqaal ah
Daahyo daahir ah